Oromia (WBO): Tarkaanfii WBO Godina Kibba-Baha: Irree fi Gaachanni Saba Oromoo, Waraanni Bilisummaa Oromoo Diina Haleele | OromianEconomist
Oromia (WBO): Tarkaanfii WBO Godina Kibba-Baha: Irree fi Gaachanni Saba Oromoo, Waraanni Bilisummaa Oromoo Diina Haleele	November 8, 2016
Posted by OromianEconomist in WBO.
Tags: Oduu Tarkaanfii WBO, WBO
Tarkaanfii WBO Godina Kibba-Baha
(SBO) Gootichi Humni Addaa WBO Godina Kibba-Bahaa, Baalee keessa socho’u Onkoloolessa 27 – 29 bara 2016 lola hadhaawaa waraana weerartuu wayyaaneen bobbaase waliin godinicha keessaa bakkoota adda addaatti gaggeesseen injifannoolee cululuqoo galmeessee jira. Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Baalee keessa sosso’u lola kanaan loltoota wayyaanee 70 ol tahan ajjeesuu fi madeessudhaan meeshaalee waraanaa Saglii lamaatis diinarraa hiikkachuun dantaa QBOf oolchuu Ajajni WBO Godina Kibba-Bahaa beeksiseera.
Haaluma kanaan Onkoloolessa 27 bara 2016 Godina Baalee Ona Raayituu bakka Waldaya Laga Dharroo jedhamutti galgala keessaa sa’aatii 5:00 hanga 6:00tti Humni Addaa WBO waraana mootummaa wayyaanee sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG fi sochii WBO dhabamsiisuu akeekkatee Somaaliyaarraa Gammoojjii Baalee keessa qubsiifame haleelee jira. Humni diinaa heddummina qabu kun akeeka diinummaa bakkaan gahuuf halkanii fi guyyaa odoo olii-gadi fiiguu gootowwan miseensota WBOtiin haleelamee kasaaraa mudateera. Gootichi Humni Addaa WBO Godina Kibba-Bahaa lola
Waldaya Laga Dharroo irratti wareegama qaalii baasuudhaan injifannoo galmeessaniin:
Loltoota wayyaanee 10 battalumatti ajjeesuu,
15nii ol madoo akkaan hamaa taasisuu
Qawwee AKM-47, 10 hidhannoo guutuu waliin
Bombii harkaa F1 jedhamu 30
Rasaasa AKM baay’inni isaa 1200 tahu,
Boorsaa duydaa 10 lola kanarratti humna diinaarraa booji’uudhaan qabsoo bilisummaa ABOn hogganamuuf akka oolche Ajajni WBO Godina Kibba-Baha Oromiyaa beeksisee jira.
Guyyuma kana galgala gartuun Mahaandisoota Humna Addaa WBO, Miinoo farra-namaatiin daandiiwwan kallattii Sadiin Ona Raayituu, Qarsaa Allaattii fi Ona Sawweenaa irraa humni waraanaa wayyaanee ittiin loltoota isaaf birmachuuf malurratti tarkaanfii fudhatee jira. Mahaandisootni WBO miinoo farra-namaa daandilee waraanni wayyaanee humna isaa WBOdhaan haleelameef birmachuuf irra gulufaa turerra kallattii Sadeeninuu dursanii awwaaluudhaan:
Loltoonni 10 battalummatti miinoon itti dhuka’ee daaraa yoo tahan
16 ammoo haalaan madaa’anii qaamaa hir’achuun kasaaraan irra gahuu Ajajni WBO Godina Kibba-Bahaa dhaamee jira.
Irree fi gaachanni saba Oromoo WBOn godina Baalee keessa socho’u haleellaa humnoota wayyaanee Oromiyaa weeraran irratti raawwatu jabeessee itti fufuun, Onkoloolessa 28 bara 2016 Ona Sawweenaa bakka Kaarra Dhaddoo jedhamu lafa marfata gaaraa keessatti tarkaanfii haxxeetiin diinarratti milkii gonfateera.
Gootichi Humni Addaa WBO ganama sa’aatii 6:20 hanga 7:00tti tarkaanfii haxxee hidhee miinoo farr-namaa awwaaleen fudhateen humna waraana wayyaanee sakattaa WBOf bobbaafaman keessaa 8 ajjeesee, 12 ol kan madeesse yoo tahu, loltoonni diinaa tarkaanfii WBOtiin madaahanis waldhaansaaf gara mana Yaalaa Gindhiiritti geeffamuun mirkanaawee jira. Madoon loltoota wayyaanee keessumaa kanneen miinoo farra-namaatiin madaahan miidhaan irra gahe akkaan cimaa tahuurraa Gindhiir irraa gara Finfinneetti dabarfamaa jiraachuu Ajajni WBO Godinichaa dhaamsa ergeen hubachiiseera.
Guyyuma kana, Onkoloolessa 29 bara 2016, humni addaa WBO loltoota wayyaanee madoo isaanii fe’atanii deemaa turan Ona Sawweenaa Mudhii Harooressaa bakka jedhamtutti haxxee hidhee dhukaasa sardaa itti banuun madoolee baatanii deemaa turan dabalatee loltoota wayyaanee 12 hojiin ala gochuun qawwee AKM-47, 6 hidhannoo guutuu waliin booji’eera.
Waraanni Bilisummaa Oromoo lola hadhaawaa Godina Baalee bakkoota adda addaatti taasisee injifannoo cululuqaa itti galmeesse kanarratti wareegama gootummaa qaalii baasuullee Ajajni WBO godinichaa dabaluun hubachiiseera.
Ajajni WBO Godina Kibba-Baha Oromiyaa dhaamsa dabaluudhaan dabarseen falmaa hadhaawaa fi ulfaataa goototni muratoon WBOn lubbuu jijjiirraa hin qabne baasanii gaggeessaa jiran akkasumas wareegama Qeerroo fi ummanni Oromoo biyya keessaa itti dhumatee kafaluun qabsoo finiinsaa jiru kana gariin dhala Oromoo odeeffannoo haala adda addaatiin dhageenyuun itti qoosuu fi gara-dabarsuuf yoo tattaafatanii fi dhiigaa-lafee teenyatti qoosuu wayta barbaadan dhageenya.
Oromoo! Nuti kan duunee awwalcha malee hafaa jirru maaliifi? Wareegamni keenya garaa isin hin nyaanne? Qeerroon guutummaa Oromiyaa keessatti akka bosonuutti adamfamuun waraana weerartoota wayyaaneen ajjeefamanii akka saree gatamaa jiranis akkuma WBOdhaa awwaalcha dhabanii, ummatni keenya yeroo ammaa kana baddaa fi gammoojjiin hundi waraanaan marfamee akkuma bosonuu adamfamaa jira. Sabni bakka seenuu fi waan tahu wallaalee halkanii fi guyyaa hiraaraa jira. Qeerroon hammi carraa argatan bosonatti nutti dabalamee ajjeesee du’uun seenaa yoo hojjataniis hedduun carraa kana dhaban, ilmaan boru biyyaa fi sabaaf bu’aa meeqa buusan, hegereen abdii Oromiyaa dargaggoonnii fi shamarran hedduun harka duwwaa shiftoota wayyaaneen qacaleetti nu jalaa nyaatamaa jiran. Kun qaama eenyuu ti? Kun isin hin laalessuu? Maraafuu ilmaan Oromoo dhiiga Oromummaa dhugaa qabdan hundaaf dhaamsi keenya akkaan ifaa fi gabaabaa dha.
ABO fi WBOn kallacha, gaachana abdii saba Oromoo ti. Dhalli Oromoo bilisummaa hawwu kamuu ABO fi WBO jabeeffachuun alatti falli qabu hin jiru. Kanaaf dhalli Oromoo ABO fi WBO diina ajjeesee ofiif wareegama baasaa jirurratti olola ergama diinummaa oofuufii oofsisuun yakka diinummaa irraa adda baafnee tasa hin ilaallu.
Beekaas tahe wallaalaan namootni, murnootni biyyoota alaa teessanii nyaattanii, uffattanii, maatii teessan akka gaarii guddifatuun nuhii dhiiga keenya dhangalaasaa dawaa tokkoon maleetti madoo teenya qunbii itti hidhannee yaallachaa jaallan wareegaman irra tarkaanfannee falmaa hadhaawaa gochaa jirrurratti gochi ololaa fi sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa akka dadhabuu fi laaffatuuf karaa fi bifa fedheenuu hojii farrummaa fi yakkaa QBO irratti raawwataa jirtan akka irraa dhaabbattan akeekkachiifna. Tahuu baannaan sabni keenya sabummaan itti dhagayamu diinaa fi isin hunda ija takkaan akka ilaaluu qabu gadi jabeesinee dhaammanna.
Ajaja WBO Godina Kibba-Baha Oromiyaa
Odeeffannoo waraana wayyaanee keessaa bahe
(Oromia press) — Naannawa Qabridaar Zoonii Bahaa Kutaa Waraanaa 33ffaa keessatti Waraanni Wayyaanee Walitti gara galuudhaan Qondaalotni Wayyaanee kan Sabaan Tigree tahan Afur (4) akka Ajjeefaman dubbata. Sababni walwaraansi kun irratti eegalames, Warraana zoonii bahaa kutaa waraanaa 33ffaa tin ” Deemtanii Nageenya Harargee Bahaa fi Lixaa ykn Addeellee fi Cirootti akka eegsiftan” kan jedhu Ajajni erga dabree booda, waraanninis Dhaadannoo ” Gaaffiin ummataa haa deebi’u, Ajajoonni TPLF qofti nun ajaju, ABO’n Gaachan ummataatii fi kkf erga jedhan booda walitti gara galuudhaan wal dhahan jedha maddi oduu amanamoo kun.
Kanumaan wal qabatee, Warri meeshaa waraanaa wajjiin badanis Hedduu akka tahaniifi Joollee waraana kana keessa jirtus Nama 52 akka hidhanis ni dubbata.
Odeeffannoo dabalataas hordofnee isiniin geenya,
Gadaan Gadaa bilisummaati.